Iziphepho Ezishisayo Zasehlane: I-Spas nezindawo zokuhlala ozothanda zona
I-united states California Palm Springs
Iziphethu Ezishisayo Ehlane LaseMountain Springs
Izindawo eziya eSoak eDesert Hot Springs
Ngeke ukholwe ukuthi usehlane, kunamanzi amaningi aqhubekela phezulu ezindaweni zonke, kodwa iDesert Hot Springs igcwele izindawo zokujabulela imithombo yamaminerali yemvelo kanye nokwelashwa kwe-spa futhi ngokuvamile iphumule.
I-El Morocco Inn ne-Spa yaqala ekuqaleni kwawo-1960 njenge "spa-tel," i-motel enesiphethu esishisayo esondla izibhamu zayo zokubhukuda namabhati ashisayo. Namuhla, ibuyiselwe kabusha isitayela se-Moroccan.
I-Hacienda Hot Springs Inn inamachibi amaminerali, i-lagoon kanye nensimu futhi enezingamelo eziyisithupha kuphela, iyinto ekhethekile kakhulu.
I-Hope Springs Indawo yehhotela elishiwo ngamakamelo angu-10 namachibi ama-3 endaweni yokuhlala yama-1950s ehlelwe kahle ngesitayela esincane.
I-Waters Living Spa iyindawo yokulala neyedlakufesi eyakhelwe eduze nentshonalanga eshisayo. Izembatho zokuzikhethela.
I-Miracle Manor inendlela yokuphila ephakathi kwe-spa kanye nesikhungo sokuphumula, kungekho amawashi (azofika ukukukhumbuza uma unesisindo esihleliwe) futhi empeleni, amanzi ashisayo entwasahlobo.
Ukukhulisa i-Nest Mineral Hot Springs I-Retreat ne-Spa iyindawo encane yokubhuka emakamelweni angu-7 anikezela ngamanzi ashisayo, ama-spa kanye nendlela ephelele.
I-Sagewater Spa yindawo ehlakaniphile elungiswe ngo-1950 nge-decor minimalist, ezinye zokwelapha ezingavamile kanye nedamu lokubhukuda elihle.
I-Sea Mountain Resort ne-Spa inegumbi lezivakashi ezingu-15 zokulala futhi lamukela izivakashi zansuku zonke. Banezimbiza zamanzi amaminerali futhi banikeze ama-massages nezinye izikhungo ze-spa. Izembatho ozikhethelayo
I-Bunch Palms emibili yaqala ngokuthi yi-"Fortress West" yase-Al Capone, kodwa namuhla kunenqaba enkulu yokulwa nokucindezeleka, ngamachibi amahle, asetshenziselwa ukuphuma entwasahlobo kanye nemenyu enkulu ye-spa.
Ezinye iziphethu ezishisayo
Uma uthanda iziphethu ezishisayo futhi ufuna ukuthola okwengeziwe, hlola umhlahlandlela wethu eziphethweni ezishisayo zaseCalifornia .
Uma unesithakazelo kuningi labangaphandle, thola ikhophi ye-Touring California ne-Nevada Hot Springs kaMat Bischoff.
I-ANA Yezemidlalo Yezemidlalo e-Palm Springs, ngo-Ephreli 2017
Ukugibela i-Palm Springs I-Tram ye-Aerial
Izenzo ze-Gay Pride ze-Palm Springs
I-Anza-Borrego Desert State Park Okubalulekile
Izinto ezithokozisayo okumelwe ziyenze ePalm Springs - futhi Okuncane kakhulu
I-Palm Springs i-White Party 2017
Seattle vs. San Francisco: Amadolobha Aqhathaniswa
Kuphi ama-Quarters amaJuda ahloniphekile kunazo zonke eSpain?
Izindlela Zokuphuma Ngaphandle E-Houston
Amaqiniso Okujabulisayo Ngezilwane Zase-Afrika Nesikhumba Sabo
Umhlahlandlela Wakho Wokuhamba we-Oslo, eNorway
Izindawo ezihamba phambili ze-LGBTQ ne-Gay-Friendly eVancouver, BC
Izindawo Ezintathu Okungafanele Uzivakashe Ngaphandle Komshuwalense Wokuhamba
Izinkonzo Ezinhlanu I-Embassy yase-US Ayikwazi Ukunikeza Abahambi
Okudingeka Ukwazi NgeMexico Izinsiza-Amanzi, Amathelethi, Ifoni
Lapho Ungathola khona isidlo seVingan eLouisville
I-Fillmore Silver Spring (Amakhonsathi, Amathikithi & Okuningi)
Isiqondiso Sokuvakashela Isiqhingi saseTorcello eVenice
8 Izitimela Ezivamile Zokuhamba Izimpawulo
Ama-movie we-Summer Outdoor eBrooklyn